news2dago | Mey 2010
[Ankapobeny ] 28 Mey, 2010 08:11
Ampenjika vaovao eto @ blaogi-ko
Tonga de Gadrao Vetivety (T.G.V) izay indray no hitako fa mety @ ty “sigle” ny Tanora malaGasy Vonona ity. Satria tena rapida mihitsy ‘ty fitondrana tetezamita ity raha hanagadra olona ary tena mendrika azy tokoa ilay anarana oe TGV. Marina tokoa fa ny zavatra tsy vitan’ny mpitondra tao anatin’ny 50 taona dia vitan’zala ao anatin’ny dimy ambinifolo volana monja. Manodidina ny 200 any mantsy izao no olona efa nogadraina h@ izay nahatongavan’i zandry kely teo @ fitondrana izay t@ alalan’ny fanonganam-panjakana fa tsy t@ alalan’ny fifidianana akory. Vokany tsy maintsy tapenam-bava izay tsy mitovy hevitra sy fomba fijery aminy.
Tsy vao ela akory izay ny raharaha FIGN izay tsy asina resaka lavabe eto intsony fa niarahana nahita ny zava-nitranga ary nampalahelo satria nisy ny rà ny Malagasy latsaka ary koa nisy ny aina nafoy ihany koa samy tompon’andraikitra na ny nanafika ny toby na ireo niaro ny toby samy mitsako izay zava-bitany ny andaniny sy ny ankilany fa ny tena nahatafitohina ny tena dia ireto nanjo ny mpiasa teo @ Radio fahazavana izay nadoboka eny Antanimora nanomboka omaly izy 10 mianadahy ao ny mpilaza vaovao ao kosa ireo teknisiana miisa 3.
Izany moa dia notanterin’I basyvava manao oe:
” MD daholo ireo mpiasan'ny Radio Fahazavana !
Naiditra am-ponja (MD) daholo ireo mpanao gazetin'ny Radio Fahazavana niaraka tamin'ireo teknisiana sy ny mpiambina rehefa nandalo fampanoavana io hariva io.Marihana moa fa efa tamin'ny 20 mey izy ireo no efa notanana teny amin'ny BC Anosy ary efa nakatona tanteraka tamin'io ihany koa ny onjam-peo 88.6Fm”.
Eto kosa aho dia te hilaza fa tena efa tsy rariny intsony izao zavamisy izao. Inona moa no hidiran’ireo mpiasa ireo @ iny raharaha iny mivantana no dia zakaina ny tsy eran’ny ainy izy ireo??? Tsarovy fa raha managadra olona 1 ianao dia manangam-pahavalo 10 hafa indray koa ataovy ny kajikajy tsotsotra fa mety efa any @ olona 2000 any ho any zany no manohatra ny fomba fanaonao ankehitriny izay tafiditra tanteraka any @ ilay antsoina oe “ fitondrana jadona”. Anjaran’izay indray ny manaraka??? Mety ho izahay mpitoraka blaogy ve? Dia ho hita eo fa ny tantara no hitsara izany. Fianankavina 10 indray izany izao no very asa sy tsy misy mpiahy!!! Tena loza ity fa mandady ny trambo. Ny nanaitra ahy kely fotsiny dia toa tena ao anatin’ny planina mihitsy ilay fandrim-pahana ny manodidina an’I ra8 ny fahitako azy. An’ny FJKM raha teo moa ny Radio ary anisan’ny namelona izany radio izany I dada ary izy rahateo no manome ny karama ho an’ireo mpiasa ireo. Ka noho izay ve no antony manokana hamaizana ireo olona ireto!!! Asa aloha fa za vahiny e.
Manginy fotsiny ny fampijalina ireo olona fotorana sy alainam-bavany toy ny nanjo an’i Manandafy t@ fotoan’androny sy ny nanjo ny Pasitera Valisoa vao tsy ela akory izay sy ny nahazo an’I Tonton Ambroise. Sy ny sisa tsy ary ho voatanisa eto...
Hoy tokoa mantsy I mydago mitatitra ny vaovao manao oe:
“…, ny fitsarana an’i Ambroise RAVONISON na i Tonton, amin’ny Alatsinainy ho avy izao no hivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ity raharaha ity, niverina hamonjy ny fandrinany eny Antanimora ny lehilahy mandram-piandry izany didy izany. Ny nanaitra ny maso aloha dia ny fahitana an’i Tonton narary sady nandringa tsy afa-mandeha. Aiza ny fanajana ny zon’olombelona amin’izao « famonoana izao »?”.
Tsetratsetra tsy aritro fotsiny dia ity lahatsoaratra navoakan’I La Gazette ity:
“Fikasana handrava ny “La Gazette”: Ny pasitera Valisoa no nampaniraka
Hametraka fitoriana eny anivon'ny mpitandro filaminana ny tomponandraikitra ato amin'ny La Gazette de la Grande Ile, noho ny fikasàna handoro sy hamono ny mpiasa tao aminy. Soa ihany fa vao nanomboka ny tora-bato dia tonga ireo mpitandro filaminana nandrava ireo andian-jiolahy avy amin'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana mpiandany amin'ny vondrona Ravalomanana Marc. Ny pasitera Valisoa Rafanomezantsoa no nampaniraka ireto andian-jiolahy ireto ary nahare ny "baiko" nomeny ho amin'izany fandorana sy ny famonoana ny mpiasan'ny La Gazette, ireo mpanao gazety nanao ny asany teny amin'ny Mausolée. Fotoana fohy taorian'ny " baiko " dia nirohotra nandray vato tokoa ireo jiolahim-boto efa niandry teo anoloan'ny La Gazette de la Grande Ile. Azo sary moa ny ankamaroan'izy ireo ary hatolotra ny mpitandro filaminana hanamora ny fikarohana azy ireo izany rakin-tsary izany”.
Aminareo mpamaky ny blaogiko mety marina tokoa ve izany fiampangana izany?
Etsy an-daniny kosa anefa dia very fanahy mbola velona ny olona ary betsaka ny manotany tena manao oe avela hijanona @ izao ve ity raharaha ity. Hanao inona tokoa moa hoy ny maro fa dia aleo manaraka ny onjany eto. Dia asa tokoa aloha izay fepetra tokony ho raisina fa misokatra amintsika ny ady hevitra manomboka eto.